GW 501516 / Cardarine Ulwazi oluyisiseko | AASraw abaphakeli be powder
/Blog/Cardarine , GW 501516/GW 501516 / Cardarine Ulwazi oluyisiseko
ezaposwa ngomhla 01 / 04 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Cardarine, GW 501516.
I-GW 501516 / iKarardar Dosages kunye neBhayisikili
1.GW 501516 / Cardarine Ulwazi oluyisiseko 2.Iphi iKardiarine esetyenziswayo?
I-3.Cardarine: Uphiko lobukhulu? 4.Iziphumo kwi-Fibers yama-Muscle
5.GW 501516 / Cardarine Izilinganiso kunye nebhayisikili Izinzuzo ze-6.Izibonelelo zeCarardar / GW501516
I-7.Iziphumo zobungozi / Iimpawu eziPhakathi 8.Cardarine / GW501516 Recipes
I-9.Cardarine / GW501516 Ubunzima bomnxeba obunzima: 10.Ungathenga njani i-GW501516 / iKardiarine powder eluhlaza ukusuka kwi-AASraw?
1.GW 501516 / Cardarine Ulwazi oluyisiseko
I-Cardarine (GW-501516) yilezi zibophelelo ezibopha kwi-PPAR receptor. Yayidalwa kuqala nguGlaxo Smith Kline kunye neLigand Pharmaceuticals kwi-1992. Kwafunyaniswa ukuba iKardiarine, xa ibophelela kwi-PPAR receptor, ibhalela into ebizwa ngokuba yi-coactivator PGC-1Aenzyme, leyo eyandisa ukwandiswa kweengcambu ezibandakanyekayo kwinkcitho yamandla. Amakhanda aphathwe ngeKararine aboniswe ukuba anyukisiwe i-fatabetric acid metabolism kunye nokukhuselwa kokunyuka kuninzi ekudleni ukutya okungalungileyo, kunye nokukhuselwa okwandisiweyo kwi-2 yeswekile. Kwesinye isifundo kwi-Rhesus iimonke, i-cardarine yaboniswa ukwandisa i-HDL (i-cholesterol efanelekileyo) kunye nokunciphisa i-LDL (i-cholesterol embi). Izizathu zalo mphumela zibonakala zibangelwa ukunyuka kwe-cholesterol ye-transporter ABCA1. Ngamanye amagama, ikhadiarine isebenza ngendlela efanayo yemfuza echaphazelekayo ekusebenzeni. Ukongeza, i-cardarine yafundwa ngokusetyenziswa ekuphatheni isifo se-cardio ngaphambi kokuba ukuphuculwa kwayo kupheliswe kwi-2007.
2.Iphi iKardiarine esetyenziswayo?
I-Cardarine inkulu kakhulu into yonke! Uncedo oluxhamlayo luncedo kuyo mhlawumbi sisizathu esivakalayo sokusebenzisa le mveliso. Akukona nje ukubonakaliswa ukwandisa ukunyamezela kwizifundo zesayensi, kodwa xa uzisebenzisela wena uya kubona ukuba iziphumo aziyinto emfutshane! Ukuba ungumdlali we-cardio junkie okanye nje ngokuba uhlalise, ukwandisa ixesha lakho lokugijima. Iiseshoni zakho zokuphakamisa izisindo ziya kwandiswa ngokukhawuleza, uya kuziva unamandla kwaye ufikelele ekugqibeleni ufumane umsebenzi omningi owenziwe ngaphambi kokuba uhambe ngaphandle kwezemidlalo yonke imihla.
Ngokuqinisekileyo, ukulahlekelwa kweoli kuphezulu kwoluhlu lwezizathu ezibangela ukuba abantu abaninzi bathande iKardarine kakhulu. Izibilini kunye nemithanjeni ziyabonakala ngokugqithiseleyo kwaye uhambo lwakho lokulahlekelwa kwintsizi luba lula kakhulu, ngaphandle kweempembelelo ezininzi ezinokutsha kunye neziyobisi ezinokuthi zincinci. Ukulahleka kwefuthe kwi-cardarine kukubangelwa ukwanda kwe-glucose kwi-muscle muscle. Okubalulekileyo, usebenzise kangcono izondlo ozidlayo imihla ngemihla kunye nokunciphisa inani lama-carbohydrate okanye amafutha agcinwe njengethambo le-adipose. Ngenxa yoko, ikararine ayigcini nje evuthayo kunye ne-anti-catabolic, kodwa yinto encinci ye-anabolic ngokunjalo.
Indlela yokusebenzisa i-karidine powder? I-Cardarine inokubanjelwa kunye nantoni na, kwaye iya kuphucula iziphumo zomjikelezo. Kubasebenzisi be-anabolic-androgenic steroid abathanda isibisi trenbolone, ikhadiarine yinto emangalisayo ekumelana nemiphumo emibi ye-"tren" kunye nokuphucula imiphumo emihle.
3.Cardarine: Ingonyango yokuTyeba?
INQUBO YEZIKOLO ZASEPRAYIMARI yindlela yokuba iGW ikwazi ukukrazula umzimba weethambo ezinqwenelekayo kwaye sele i-LEGENDARY. Iimveliso zamakhemikhali kule mi sebenzi ye-PPAR ye-agonist ekuhlukaniseni i-adipocytes.
Ngokufana nokukhula kwehommone, i-sarms powders efana ne-GW 501516 ivelisa amanqaku angabonakaliyo kwiimpawu ze-adipose kunye nokunciphisa umsebenzi wegesi ezibandakanyekayo kwi-lipogenesis. Oku kuthetha ukuba umzimba unako ukuvimba iintambo ze-asidi ze-asidi ekubeni zenze kwaye zigcinwe njengamafutha.
Uphando olwenziwa kwiScientific Reports olupapashwe kwi-2015
'I-GW501516 isebenza kwiiseli ze-beta zePARAR ezisetyenziswa kuphela ngamafutha omzimba njengamandla ngendlela efanayo nomzimba xa kuhamba' kwimoya yokulamba '.
Uphando lucatshulwe luchaza: 'imisebenzi ye-physiological and pathophysiological ye-PPAR kwaye ivelise iindlela zokuvelisa izifo zesifo.
Ukusebenza kwezi galethi ezithile emzimbeni kuye kwabonakala kutshisa amafutha omzimba kwinqanaba eliyingozi kangangokuba lihlelwe 'unyango lokunyanyisa'.
Kwakungekho miphumo echaphazelekayo efunyenweyo kwiminyaka yokugqibela ye-20 yokufunda kwaye yayingqabile kakhulu ukubona ukuxhatshazwa kwemisipha kunoma ngantoni na ngexesha lophando.
4.Iziphumo kwi-Fibers yama-Muscle
Ucwaningo lwe-2015 ngu-Wei Chen, i-PhD kunye neekholeji zakhe sele zifumene ukuba ukwanda okuphawulekayo kwi-PPAR i-starmatic fucking muscle kwandisa ukusetyenziswa kwe-oxygen kwaye kwandise kakhulu ukunyamezela. Ukunyamezela okubonakalayo kuboniswe kwiebhabhwe zobhabhane kunye neendlela eziqhelekileyo zonikezelo lwe-oksijini kunye nezo zithintelo lwe-oksijini ezibonelela ubungqina obubalulekileyo bokuba iinjongo ze-GW501516 kwaye zandisa ukunyamezela kwemisipha kunye nexesha lokubuyisela kwinqanaba le-supraphysiological.
Ucwaningo olunesihloko esithi 'Ukufundwa kwe-metabolomic ye-PPARδ agonist GW501516 yokuphucula ukunyamezela kwiincinci zaseKinming' kuchaza ukuba i-BCAA yayisindiswa ngexesha lokuvavanywa kokuzivocavoca okukhulu okuye kwavumela ukuba iigundane zibe nezinga eliphezulu lokubuyiswa kwamathambo kunye neurotransmitters.
Lezi iiphunga zaziye zalahleka ubunzima ngelixa zigcina ukutya okunamafutha aphezulu, ezibonisa ukuba zinokuthintela ukukhuluphala nokunceda ukulawula ubunzima ngaphandle kokutya.
5.GW 501516 / Cardarine Dosages kunye nebhayisikili
I-dose ephezulu ekupheleni i-20mg ngosuku ukufumana inzuzo ephezulu kakhulu efunekayo iKardarine. Nangona kunjalo, ndibonayo iziphumo ezintle kakhulu kunye nemiphumo esuka kumanani aphantsi njenge-10mg.
Kucetyiswa ukuba uqale kwi-10mg kwaye uvavanye indlela ozivakalelwa ngayo, kwaye ukuba unomuvo wokuba ufuna iimfuno ezingaphezulu, yiphakamise kwi-15-20mg ngosuku.
I-half half-life is a-24 iiyure ukwenzela ukuba ixesha lakho lokuchitha ixesha ngalinye lingabalulekanga, nangona, abanye abasebenzisi babonakala befumanisa ukuba i-30-60 imizuzu engaphambi kokusebenza ibangela ukunyusa okuphawulekayo.
Ngethuba nje ufumana idosi yakho kwimihla ngemihla ekugqibeleni kuthatha into ebaluleke kakhulu, kodwa ukuba ukhetha ukwenza i-pre-workout ifike kuwe ngokusekelwe kukukhetha kwakho.
Umjikelo kufuneka uhlale apho kwiiveki ze-8-16. Emva kwelo xesha (iiveki ze-16), uya kuqalisa ukuqaphela ukubuyiswa okunciphileyo, kwaye uya kufuneka ujikeleze kwaye uthathe inyanga ngaphambi kokuba uqale olunye umjikelezo weKararine.
Nangona iCarardine ayinakuchukumisa, okanye ibeka imiphumo emibi eyaziwayo, kucetyiswa ukuba uyijikeleze nje ukuphepha ukubuyisela ukubuyela.
Indlela yokusebenzisa i-karidine powder? Ngaba Abesilisa Nabesifazane Basebenzisa iKararine?
Ewe, nokuba isini singayisebenzisa.
Akusiyo i powder ye-SARM; yi-100% engeyona inkxalabo, kwaye ibeka i-0 emibi emibi.
I-dosing yowesifazane ifanele ifane ne-dosing kumntu. Abasetyhini banokulindela okufanayo inzuzo umntu eya kufumana kulolu hlobo.
Izinzuzo ze-6.Izibonelelo zeCarardar / GW501516
I-1) I-Cardarine ikhusela ubuchopho
Kwizilwanyana, i-GW 501516 ikhusela iimpahla zengqondo xa ziphantsi koxinzelelo lwe-oxidative.
Ukuqaliswa kwe-PPARẟ ngu-GW 501516 kungaqhuba ukuphuhliswa kweeseli zesigulane.
Ukongezelela, ikhusela umkhuhlane wegazi unobungozi, ngakumbi kwimikhumbi yengqondo.
2) I-Cardarine Inzuzo Intliziyo
Xa kuthelekiswa namanye ama-SARMS powders, i-GW 501516 inqanda umonakalo okwenkcaso entliziyweni.
Iyanciphisa ingozi kunye nobunzima be-atherosclerosis (i-plaque buildup kwimithambo) ngokusebenzisa iindlela ezininzi. I-GW 501516 inyuke izinga le-nitric oxide, ekhusela i-atherosclerosis.
Kwakhona kunciphisa izilonda kunye nokuvuvukala okunxulumene ne-atherosclerosis kwimicebe.
I-GW 501516 ikhulisa imveliso ye-VEGF kumaseli egazini egazi lomntu, okubangela ukuba kusetyenziswe isakhelo kunye negazi.
Iziphumo ze-GW 501516 ukwandiswa kwe-cholesterol ye-HDL kunye nokuncipha kwi-triglycerides kwizifundo zezilwanyana, ezinokunciphisa ingozi yesifo senhliziyo kwizigulane.
I-3) I-Cardarine Yandisa i-Metabolism kwaye ivimbela ukukhululeka
I-GW 501516 isebenza i-PPARẟ, enokunyusa ukuphuka kwama-acid acids kunye nokwandisa inkcitho yamandla kwi-muscle. Oku kunokukunceda ukuphatha ukukhuluphala.
I-PPARẟ ivuselela ukubonakaliswa kweenombolo zeezityalo ezibandakanyekayo ekunciphiseni i-cholesterol kunye nokwandisa inkcitho yamandla. Olu unyango lunokukhusela ukufumana inzuzo yesisindo ngenxa yokutya.
Kwakhona, i-GW 501516 iyancipha umkhiqizo we-glucose ngesibindi kunye nokwanda kwe-insulin ekuziphatheni kwamagundane. Ngokuqhubela ukuqhutyiswa kwefiber fibre kwiimicebe, i-GW 501516 idala ukumelana nokukhuluphala.
I-4) I-Cardarine ikhusela iiIso
Kwiimicebe, kuboniswe ukuvimbela ukuvuvukala kwiiseli zezintso, kwaye kunokukhusela kwisifo seengtso. Yenza oku ngokunciphisa ibinzana le-MCP-1 ibinzana ngokuqhelekileyo kwanda kwizifo ezinje.
I-5) I-Cardarine Inceda I-System Immune System
I-GW 501516 idibene nokunciphisa ukuvuvukala.
Iququzelelwe i-PPAR. Ukunyuka kwesibindi kwizilwanyana ngokuvimbela ama-molecule anegalelo ekuphenduleni.
I-GW 501516 inokuqalisa i-PPARẟ ekhusela iiseli ezithile zeplastiki ekubeni zifake i-cell cell death ngexesha lokuphulukiswa kwenxeba. Kwakhona kwaboniswa ukuba kukhawuleze ukuvalwa kwesilonda sesifo sikashukela.
I-6) I-Cardarine ikhusela ukulimala kwesibindi
Ukusetyenziswa kwe-PPAR by yi-GW 501516 kubangela ukuba isibindi sitshintshe umthombo wamandla kwi-glucose ibe ngama-acid acids, ngaloo ndlela unciphisa ushukela wegazi.
Kwiigundane, i-GW 501516 inqandekile i-IL-6, enokukunceda ukukhuselwa kwe-insulin kwiiseli zesibindi. Ukusetyenziswa kwexesha elifutshane kunokuphelisa umonakalo wesibindi owabangelwa kukutya okuphezulu kwefructose.
Kwakhona, inokuphucula ukukhubazeka kwesibindi esingenancocoli kwiimicebe.
I-7) I-Cardarine Iphucula Ukukhula Kwemisipha kunye neStamina
Ukusetyenziswa kwe-PPARẟ nge-GW501516 kuqhuba ukuphuhliswa kwamafayili emisipha kwiigundane. Ezi ntambo ze-muscle zidibene nokusebenza komzimba okwandisiweyo. Baye bakwazi ukuhamba ngokuphindwe kabini kunamanye amagundane, kubonisa ukuphucula ukunyamezela.
I-8) I-Cardarine May Inceda UkuPhilisa Izifo Zesikhumba
Ukusetyenziswa kwe-PPARẟ kunokuphucula ukuvuvukala okubangelwa yi-psoriasis (ingxaki yesikhumba).
I-9) I-Cardarine May Ingcono UkuPhalaza kwegazi kunye nokuPhulukiswa kweNxeba
Ngokuqalisa iPARAR, iKardiarine inokunyusa ukuhlanganiswa kwe-BH4, eyenza umkhiqizo we-nitric oxide kwimithambo yegazi (eNOS).
Ukwandisa i-nitric oxide kusiza ukuphucula ukuhamba kwegazi. Kwakhona kunceda ngexesha lokuphilisa isilonda.
10) I-Cardarine ine-antioxidant kunye ne-Anti-inflammatory Potential
Andifani namanye ama-SARMS powder, iKardiarine yandisa imveliso ye-enzyme ye-antioxidant i-SOD1 kunye ne-catalase.
Kwakhona kuvimbela ukuveliswa kweamolekyu ezivuthayo ezifana ne-MCP-1, i-TNF-alpha, i-IL-6 kunye ne-NFκB. Imiphumo echasayo-inokuphucula i-fibrosis ebangelwa ukugqabhuka kwiirati.
I-7.Iziphumo zobungozi / Iimpawu eziPhakathi
I-GW 501516 ikhulisa ukufa kwesisele kwiiseli zesibindi kwaye ingabangela i-fibrosis kwiigundane ezinezifo zesibindi.
Kwizilwanyana, kukho umngcipheko wokuphuhliswa kwamaplazi kunye nokukhula komntwana kunye nexesha elide ukuvezwa okukhulu kwiGW 501516.
Kwiengoma, i-GW 501516 ingabangela umdlavuza. Akukho zifundo ezaneleyo ezenziwa ngabantu ukubonisa impembelelo efanayo.
I-GSK yashiye phambili uphuhliso olongezelelweyo lweziyobisi kwi-2007 kuba ukuhlolwa kwezilwanyana kubonise ukuba isilwanyana sabangela umdlavuza ukukhula ngokukhawuleza kwizitho ezininzi.
Ngenxa yokuba i-GW 501516 inexabiso elininzi kwiindawo ezininzi emzimbeni, kufuneka uqwalasele iimiphumo zalo ngaphambi kokuphandle njengonyango.
Ngoko ke, ungasebenzisa njani i-karidine powder?
8.I-Cardarine / GW501516 Recipes
IMISEBENZI YOKWENZA IMISEBENZI:
I-Ostarine (MK-2866) 25mg / ml iresiphi yamanzi yomlomo:
15g I-Ostarine (MK2866) powder
I-Andarine (S-4) 25mg / ml iresiphi yamanzi yomlomo:
15g I-Andarine (S-4) ipowder
Gw-501516 (Cardarine) 10mg / ml iresiphi yamanzi yomlomo:
1000ml Utywala Otywalayo
Isixhobo samanzi ngokuqhelekileyo siya kugcinwa kwiibhotile ze-glass drop.
I-9.Cardarine / GW501516 Ubunzima bomnxeba obunzima:
Iikhathalogi: I-SARMS powder
Ubunzima: Amanzi (amancinane), i-DMSO, i-Ethanol
Iprogram ye-Organoleptic: I-White to beige ipowder efanelekileyo, ingenangqumbo, inambitheka
Ngokuphathelele indlela yokusebenzisa ipakarine powder, nceda uqhagamshelane nommeli wokuthengisa.
10.Ungathenga njani i-GW501516 / iKardiarine powder eluhlaza ukusuka kwi-AASraw?
Yintoni i-Super Cardarine? / IiNzuzo ze-8 zeCarardarine Izinto ze-9 ofuna ukuzazi malunga neCarardarine powder !!! I-Pregabalin powder: yiyiphi i-pregabalin esetyenzisiweyo?
tags: powarine powder, gw501516 powder, indlela yokusebenzisa i-powine powder
I-Fluoxymesterone / Halotestin ipowusi eluhlaza Isingeniso	(MK-677 Powder) Iingcebiso zokusebenzisa i-Ibutamoren Powder